လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတာနဲ့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်သုံးတာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ ။ ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ 23/05/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ဘယ်ဟာလို့ထင်ပါသလဲ။ တစ်နေ့မစားရင် မနေနိုင်ကြတဲ့အတွက် အစားစားတဲ့နေရာမှာ အဓိက အရေးပါတဲ့ လက်သန့်ရှင်းရေးက အရေးအကြီးဆုံးပါ။ သန်ကောင်တွေရန်ကလည်း ကြောက်ရတယ်မလား။
လက်ကိုသန့်စင်တဲ့နေရာမှာ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး သန့်စင်နိုင်သလို ခုနောက်ပိုင်း ရေမရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပါ သုံးလို့ရတဲ့ ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်တွေ ထွက်လာပါပြီ။
ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေက နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့အပြင် သုံးရတာလည်း လွယ်ကူတယ်မလား။ တစ်ချို့ဆို ရေနဲ့ဆပ်ပြာနဲ့တောင် မသုံးတော့ဘဲ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေကိုပဲ လွယ်လွယ်သုံးလိုက်ကြတာတွေရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာက ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးတာနဲ့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်သုံးတာမှာ ဘယ်လိုကွာခြားချက် တွေရှိလဲ။ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ ။
ကွာခြားချက်တွေ အရင်မပြောခင် လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီးလက်သန့်စင်တာ အကြောင်းလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးမယ်ဆိုရင် လက်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပိုးမွှားနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ သန့်စင်ဖို့အတွက်
• တစ်ခါဆေးရင် စက္ကန့် ၂၀ လောက်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ပိုးမွှားတွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေက ဆပ်ပြာနဲ့ထိတွေကပျော်ဝင်ပြီး ရေဆေးချလိုက်တာအခါ ရေနဲ့အတူ ပါသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဒီနေရာမှာ ရေအေးနဲ့ဆေးတာ ရေနွေးနဲ့ဆေးတာက အရေးမကြီးဘဲ ကိုယ်အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီးလက်ဆေးတယ်၊ လက်ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားကိုရောက်မရောက်နဲ့ သုံးတဲ့ ဆပ်ပြာ အမျိုးအစားက စကားပြောသွားပါတယ်။
တကယ်လို့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာ လွယ်လွယ်ကူကူ မရဘူးဆိုရင်တော့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
• ကိုယ်သုံးတဲ့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် hand sanitizer က ဂျယ်လ်ပုံစံဖြစ်ပြီး စေးကပ်ကပ်မကျန်ခဲ့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
• ပိုးသေစေဖို့ alcohol ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်။
• ဆေးရည်လေးကို လက်ထဲထည့်ပြီး ပွတ်လိုက်ရုံပဲ ဖြစ်တာကြောင့် သုံးရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင် ဘူးပုံစံနဲ့ ထုတ်ထားတော့ သွားလေရာနေရာကို ဆောင်သွားလို့ရတာပေါ့။ အချိန်မရွေးထုတ်သုံးလိုက်ရုံပဲလေ။
ဒီတော့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး သန့်စင်တာနဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ။
လက်သန့်ဆေးရည်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ် သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် ပုံမှန်ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး လက်ဆေးတာကို သူတို့က အစားမထိုးနိုင်ပါဘူး။
• အားလုံးသိကြပါတယ်။ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေက ဘက်တီးရီးယားကို ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သေစေတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် ၁ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ကျန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီ ၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုးမွှားတွေ ကိုယ့်ထဲ ရောက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းကြီးစိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီးဆေးတာကကျတော့ ဆပ်ပြာက ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းပိုးမွှားတွေကို သေစေပြီး ကျန်တဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းက ရေဆေးချလိုက်ရင် ပါသွားမှာ ဖြစ်တာကြော့င့် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီးဆေးတာက ပိုစိတ်ချရပါတယ်။
• လက်သန့်ဆေးရည်တွေထဲမှာပါတဲ့ alcohol တွေ အခြား ပိုးသတ်ဆေးဓာတုပစ္စည်းတွေက လက်ပေါ်မှာပဲ ကျန်ခဲ့တတ်တာကြောင့် ဗိုက်ထဲ ဝင်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။. ရေနဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ သုံးရင်ကျတော့ ရေဆေးလိုက်တာကြောင် ပိုးမွှားအညစ်အကြေးတွေရော ဆပ်ပြာမှာပါတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ရော အကုန်လုံးစင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး သန့်စင်ခြင်းကြားမှာ ကွာခြားချက်ဆိုလို့ ခုပြောပြခဲ့တဲ့ ၂ ချက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်တယ် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြောပြာ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေက ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ်ပြောပြော ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်တွေက ရေနဲ့ဆပ်ပြာကို အစားမထိုးနိုင်တာအမှန်ပါ။ ။